macOS Catalina 10.15.7 na Safari 14.0.3 na-emelitekwa | Esi m mac
macOS Catalina 10.15.7 na Safari 14.0.3 na-emelitekwa
Mmelite ndị a abụghị naanị maka macOS Big Sur ndị ọrụ, enwerekwa ụdị ọhụrụ nke macOS Catalina mana na nchekwa a. Typesdị mmelite ndị a na-abụkarị nkịtị mgbe Apple wepụtara nsụgharị ikpeazụ nke sistemụ arụmọrụ kachasị ọhụrụ dị Na MacOS, gị na ha ị melite nchekwa ma na-agbakwunye mgbanwe na nsụgharị ndị dị na ihe nchọgharị Safari gị.
A dụrụ ndị ọrụ niile ọdụ ka ha wụnye Nwelite Nche 2021-001 ka ọ na-eme ka nchekwa macOS ka mma.
Na nke a ụdị ọhụrụ nke MacOS Katalina 10.15.7 O yiri ka ọ na-emetụta nchebe nke usoro ahụ ma anyị ga-ahụ mgbanwe ole na ole ọzọ na ya. N'aka nke ọzọ, Safari na-agbakwunye ọtụtụ mgbanwe n'ihe banyere nkwụsi ike na nchekwa.
Obi abụọ adịghị ya, a ghaghị itinye nsụgharị ọhụrụ ndị a ozugbo enwere ike ma ọ bụrụ na anyị enweghị mmelite akpaghị aka ahazi na Mac. Ya mere, anyị na-akwado lee anya na Sistem Mmasị n'ime nhọrọ mmelite. Mgbe inwetara ya, ọ ga - egosi gị nhọrọ iji melite ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Bụrụ na ọ nwere ike, ọ bụrụ na ị na-eji nsụgharị tupu macOS Big Sur na Mac gị n'ihi na ịnweghị ike ịwụnye ya, anyị na-akwado ka ịlele ma ọ bụrụ na ị nwere ụdị ọhụụ a dịnụ ma wụnye ya ozugbo enwere ike ịnụ akụkọ nchekwa na Mac gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac OS X » MacOS Catalina » macOS Catalina 10.15.7 na Safari 14.0.3 na-emelitekwa
Esi emeghe Apple iji Apple Watch
Enwere ike ịzụta AirPods Max pad ugbu a n'adabereghị